Donaald Traamp Biyya Isaanii Gurmuu Daldalaa Paasifiki Keessaa Baasuuf Mallatteessan
Prizidaantiin Yunaayitid Isteets – Donaald Traamp, har’a torban hojii haaraa ennaa jalqabanitti, biyya isaanii kan biyyoonni 12 keessa jiran – gurmuu daldalaa Paasifik, kan “Pacific Rim” jedhamu keessaa baasuuf qophaa’uu isaanii beeksisan.
Walii-galteen daldalaa ka biyyoota Paasifik gamaa waliin tolfame kun, bara 2009 ennaa prezidaant Obaamaan taayitaa irra turan ka dubbatame yoo tahu, miseensonni mana-maree Yunaayitid Isteets, garii mormuudhaan kaan irraa of qusachuudhaan waan deggersa dhowwataniif haga ammaa otuu hin ragggaasisamiin ture.
Sillaa otuu waliigalteen kun raggaasisame tahee, Yunaayitid Isteets – Jaappaan, Awustraaliyaa, Niwuuzilaand, Maaleetziyaa, Chiilii, Kanadaa, Meksiikoo fi biyyoota ka biroo afur waliin hariiroo daldalaa tolfafttee hojjetti turte.
Addunyaa irratti walii-galtee dinagee isa bal’aa jedhame kun --- dinagdee Addunyaa keessaa dhibba irraa harka afurtama, daldala Addunyaa irraa immoo gara sadii keessaa harka tokkoo qabata – jedhamee ture.
Kan kana dhaadhessaa turan – Prezidaantiin Yunaayitid Isteets duraanii – Baaraak Obaamaa, “qajeelfama dinagdee Addunyaa biyyoonni akka Chaayinaa barreessuu hin qaban. Nu tu haala kanaan barreessuu qaba” – jedhanii turan.
Kan Jimaata dabre taayitaa qabatan – Prezidaant Traamp immoo, waliigalteen akkasii, “kaanpaaniileen guguddoon humna rakasa barbaacha hojii isaanii gara biyyoota alaatti godaansisan godhee, hojjetoota Ameerikaa hojii isaanii dhabsiisa” – jechuun yeroo dheeraaf mormaa turan.
Pirezdaantin Gaambiyaa Haaran Koomishinii Araaraa, Bara BulchiinsaYahiyaa Jammeeh Qoratu Hundeessu Barbaada
Repuublikiin Afriikaa Waaltaa Hojjettoota Gargaarsaaf Bakka Hamaa Dha
Tirampi pirezidaantii US tahee hujiittitti jira nama isa waliin dorgomee jalap jige,Hilarii Kilinton qophiin Filadelfiyaatti tolchaniif keessaa hagii tokko kunoo